AKON’NY FAMPIELEZAN-KEVITRA FIFIDIANANA LOHOLONA : Voahajan’ireo kandida ny fitsipi-dalao
Nizotra tamim-pilaminana tanteraka ary nanaraka tamin’ny antsakany sy andavany ny lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra ireo kandida nirotsa-kofidiana Loholona. Fahanginana mialoha ny fifidianana ny anio ary hotontosaina rahampitso kosa ny latsa-bato manerana Nosy. 10 décembre 2020
Nifarana omaly tamin’ny misasak’alina ny fampielezan-kevitry ny fifidianana Loholona. Tamin’ny ankapobeny nangina tanteraka ny fomba nanatanterahan’ireo kandida izany. Nisongadina ny fifandresen-dahatra mivantana. Feno ny fandaharam-potoanan’ireo kandida, fanatonana ny biraon’ny Kaominina izay namoriana ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina no paikady nataon’ireo kandida. Iretsy voalohany ihany koa no mpifidy andrasana handatsa-bato ho amin’ny rahampitso ka izay hambabo ny fon’izy ireo no imasoan’ireo kandida.
« Nisafidy ny namory ny mpifidy vaventy tamin’ ny toerana iray ny kandida ka nisafidy izany amin’ ny fanehoany hevitra sy fandresen-dahatra ”, hoy ny nambaran’ny mpampakatenin’ny Céni. Raha ny tomban’ezaky ny fizotry ny fifidianana dia nilamina izany ary nanaraka ny lalàna. Tsy nisy fitarainana na fitoriana mahakasika endrika tsy fanarahan-dalàna voarain’ny teo anivon’ny Céni hatreto. « Tsy nisy kosa ny fitarainana voarain’ ny Céni tamin’ ny endrika nanaovan’ ireo kandida fampielezan-kevitra. Samy nanaja ny fepetra voalazan’ ny lalàna avokoa izy ireo », hoy hatrany izy.
Nanamafy izany ny filohan’ny Céni, Hery Rakotomanana izay nilaza fa azo heverina tanteraka ny hizoran’ny fifidianana ao anaty filaminana raha ny endrik’iny fampielezan-kevitra iny. « Ankehitriny dia samy mahazo tombony ny rehetra miaina ao anatin’ny filaminana ary miandrandra fifidianana Loholona mirindra », hoy izy. Miditra amin’ny fahanginana iray andro mialohan’ny fifidianana ireo kandida anio. Mampatsiahy hatrany ny eo anivon’ny Céni fa misy hatrany ireo fanaraha-dalàna tsy maintsy arahina. « Eo anatrehan’izany fanajana lalàna izany indrindra dia mampatsiahy ny rehetra izahay fa anio dia natokana ho fahanginana tanteraka manodidina ny fifidianana.
Noho izany dia voararan’ny lalàna ny manao fampielezan-kevitra na mivantana na ankolaka amin’io andro mialohan’ny fifidianana io. Izany no tandremantsika dia ny mba hiantohana ny filaminana eto amin’ny tany sy ny Firenena. Eo anatrehan’izany rehetra izany ary dia lazaina fa fahanginana ara-pifidanana manerana ny Madagasikara iray manontolo anio », hoy ny filohan’ny Céni nampatsiahy. Vonona tanteraka ny Céni amin’ ny fiatrehana ity fifidianana ity. Efa tomombana avokoa ny pitsopitsony rehetra hoenti-miatrika izany.